उतराखन्डको शान मानिने यी अभिनेत्री छिन निकै बो’ल्ड, हेर्नुहोस तस्विर! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
उतराखन्डको शान मानिने यी अभिनेत्री छिन निकै बो’ल्ड, हेर्नुहोस तस्विर!
उर्वशी रौतेला बलिउडको अभिनेत्री तथा मोडल हुन्। उनको जन्म २५ जनुअरी १९९४ मा उतराखन्डमा भएको हो। उनले आफ्नो अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालयबाट पूरा गरेकी हुन् ।
उनलाई बच्चैदेखि मोडलिंग र अभिनयमा खास रुची थियो। त्यसैले बाल्यकालदेखि नै उनले मोडलिंगमा विशेष ध्यान राख्दै आइन । उनले १७ वर्षको उमेरमा मिसटिन इन्डिया २००९ मा जितेकी थिइन्। साथै उनी मिस ट्युरिजम जित्ने पहिलो एसियन महिला थिइन्। त्यसकारण उनको विशेष चर्चा हुन्थ्यो।
उनले २०१३ मा फिल्म ‘सिंग साब ‘ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी थिइन्। उनी सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय रहन्छिन्। उनी सामाजिक संजालमा आफ्नो फोटो शेयर गरिरहन्छिन्। उनले समाज सेवामा विशेष योगदान दिएकी छिन्। उनलाई उतराखन्डको शान पनि मानिन्छ।